Muxuu kadhiganyahay heshiiska-doorasho ee Muqdisho lagu gaaray? - Tilmaan Media
in SOOMAALIYA, QORMO
Waxaa shalay heshiis kagaaray doorashada dalka kadhici doonta Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Heshiiska oo ahaa mid aad loo wada sugayay ayaa wuxuu kaduwan yahay heshiiskii Dhuusamareeb3 ee ay wada gaareen qaar kamid ah Dowlad Goboleedyada, gobolka Banaadir iyo Dowladda Federaalka.
Shirka oo socday muddo 5 cisho ah ayaa waxaa kasoo baxay warmurtiyeed kakooban 15 qodob oo ah kamuuqao intaan lagu heshiin kahor in dagaal iyo dood kululi kahoraysay, beesha caalamkuna isku celcelinaysay madaxda Soomaalida.
Qodobada lagu heshiiyay waxaa kamid ah:
In dadka dooranaya halkii kursi ee Golaha Shacabka ah ay noqdaan 101 qof halka Samoreeb 3 ahaayeen 301. Sidoo kale waxaa heshiis laga gaaray arinta la xiriirta tirada magaalooyinka ay codbixintu kadhacayso, waxaana laga dhigay 2 magaalo dowlad goboleed kasta halka Samoreeb 3 ay ahaayeen 4 magaalo.
Sidoo kale waxaa laga heshiiyay qodob aad la isugu khilaafsanaa kasoo ahaa guddiga doorashada. Heshiiskii Samoreeb 3 ayaa dhigayay in guddiga doorashada ee hadda jira uu hawsha sii wado, laakiin hadda waxaa lagu heshiiyay in dowladda federaalku soo magacawdo guddi doorasho oo cusub kaasoo kaashan doona guddi doorasho oo heer maamul goboleed.
Arrintii la xiriirtay in doorashada lagu galo axsaab siyaasadeed heshiiska laguma soo carab baabin ogolaansho iyo diidmo midna. Waxaana muuqata marka la, eego sida doorashadaan ugu egtahay tii 2016 in aan axsaab lagu gali doonin.
Qodobka 11 aad ee heshiiska wuxuu dhigayaa in loo gudbiyo baarlamanka federaalka si ay u meel mariyaan. Inkastoo dadka qaarkood cabsi ka muujinayaan in baarlamanku diido heshiiskaan, haddana uma badna in sidaasi dhacdo. Maxaa yeelay baarlamanku kama madax banaana madaxtooyada, madaxtooyaduna mahaysato wakhti dheeraad ah oo ay dagaal kale ku gasho. Sidaas darteed waxay ubadantahay in baarlamku aqlabiyad ballaaran kumeel marin doono heshiiskaan.
Ugu dambayn waxaa muuqata in Soomaaliya tubtii doorasho cagta saartay wixii shalay kadambeeyay. Waxaa dhamaaday xilligii shakkiga iyo mugdiga.Cidii rajjo kale hogaanka dalka, haatan waxaa umuuqata halka ay kabilaabi karaan shaqada. Dowladaha lugta kula jira siyaasadda Soomaaliya waxay si xoog badan u bilaabayaan dajinta shaxda ay ku soo saarayaan dadka ay wataan ama wakiilka ka ah.
Cod kala iibsashada, iyo wax isbadaba marintu halkii bay kasii socon. Maxaa yeelay hogaanka Soomaalidu afartii sano ee lasoo dhaafay waxay ku fashilmeen inay abuuraan jawwi siyaasadeed oo kaduwan kii hore. Shacabka iyo masaakiinta umbaa ku dhibaatoon doona natiijada kasoo baxaysa loolanka dhex mari doona bayacmushtarka siyaasadda Soomaaliya.
Hogaanka siyaasaddu wuxuu ku fashilmeen inay isfaham kagaaraan kuna heshiiyaan waxa dantu ugu jirto dadka iyo dalkaba. Waxay wakhti badan ku bixiyeen loolan siyaasadeed oo koox walba ama qof walba ilaashanayo dano gaar ah iyo sidii kursiga kusii haysan lahaa. Heshiis la,aanta siyaasadeed miraheedii waxay noqdeen in markale ay shacabka Soomaaliyeed utaliyaan afarta sano ee soo socotta hayado dowladeed oo aan sharciyad buuxda haysan.
Waxayna ubadantahay in Ila-Meeraysashada lagu sii jiri doono wakhti dheer haddaan lahelin caqli iyo garasho kaduwan kan sanadihii lasoo dhaafay dalka lagu maamulayay.